နေ့လည်စာကဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
При чтении книг мне довольно часто встречается слово ланч. Так вот, слово это означает — второй завтрак. Второй завтрак — это прим пищи за пару часов до обеда. Знаю, что в России многие заменяют слово обед не ланч.
နေ့လည်စာသျောနေ့လယ်စာအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးတစ်ချိန်တည်းကြောင့်ညစာစားရန်နီးကပ်လာသည်။ အင်္ဂလန်နှင့်အမေရိကားအတွက်များသောအားဖြင့် 12-13.00 အကြောင်းကိုနှင့် 19.00 န်းကျင်စားသောက်; quote; Lanchuyutquot ။ အဆိုပါနေ့လယ်စာ menu ကိုများသောအားဖြင့်အသားညှပ်ပေါင်အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။
Broen နေ့လည်စာကိုလည်းနေ့လယ်စာအဖြစ်နီးပါးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, သင်ညစာရှေ့မှာလွယ်ကူသောနေ့လည်ခင်းရေစာရှိသည်။ အလုပ်, ကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများရှိ, နေ့လည်စာများအတွက်နေ့လည်စာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်ချိုးလည်းမရှိ, လူတွေအထူးနေ့လည်စာသေတ္တာများဆောင်ခဲ့ရမည်။ ရုရှားတွင်လွန်း, ကျောင်းသားသမီးတို့အဘို့ပလပ်စတစ်နေ့လယ်စာ boxes တွေကိုရောင်းဖို့စတင်ပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်မနက်စာကိုဆိုလိုသည်သောစကားလုံးနေ့လယ်စာစားပွဲကနေဖွဲ့စည်းခဲ့နေ့လယ်စာ, အလင်းနေ့လယ်စာ, နံနက်ယံ၌နံနက်စာပါလိမ့်မယ်ပေးသောနေ့လည်စာစကားလုံး။
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများတစ်ချိန်တည်းမှာနေ့လယ်စာရန်ရှိသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12.00 14.00 မှအတူ။
ဤသည်အစားအသောက်အကြားနေ့လယ်စာအစားအစာသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒါကအပို quote; perekusquot; နေ့လယ်စာသည်အထိမနက်ဖြန်ကနေကာလ၌အဘယ်မှာဆယျ့နှစျနာရီ၌တည်၏။ အစာအိမ်ပြည့်နေပါသည်နှင့်ညစာအတှကျပွငျဆငျခွငျးမဒီဇိုင်း Non-အာဟာရအဖျော်ယမကာနှင့်အတူအများအားဖြင့်ဒီအလင်းအချိုပွဲ။
နေ့လည်စာနံနက်စာနှင့်နေ့လည်စာအကြားမွန်းတည့်အချိန်၌မုန့်ညက်, သို့မဟုတ်ပါကနေ့လယ်စာဟုခေါ်သည်။ ဒီအစဉ်အလာကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံတွေကနေရုရှား လာ. , 12.00 နှင့် 13.00 နာရီအကြားကွာဟမှုအတွက်စီစဉ်ပါ။ နေ့လည်စာများသောအားဖြင့်တစ်ဦးကဖီး, စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ကလပ်အတွက်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်, စည်းကမ်းအဖြစ်, မိတ်ဖက်သို့မဟုတ် Co-လုပ်သားများသည်။ နေ့လယ်စာမှာ 2-3 ဟင်းလျာများထက်မပိုဝတ်ပြုကြ၏။ ယင်းနေ့လယ်စာများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတီချေ။
နေ့လယ်စာ — употребление пищи в полдень.
Захотелось второй раз позавтракать, но уже на рабочем месте — звони и будет тебе ланч.
နေ့လည်စာ, နေ့လည်စာသည်အင်္ဂလိပ်, 13-00.Na နေ့လည်စာအကြောင်း 14-00 မှာစတင်သည်ပူသို့မဟုတ်အအေး zakuski.Posle နေ့လယ်စာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်ကြောင့်နေ့လယ်စာ၏ဗြိတိသျှ uzhin.Navernoe ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းနေ့လယ်စာပြီးသား 19-00.Poluchaetsya န်းကျင်လာ ညဥ့်အခါသူတို့လျှို့ဝှက်စွာရေခဲသေတ္တာမှခိုးကြောင်ခိုးဝှက်။
Ланч — это второй завтрак, пришло к нам с Англии, так как обед у них происходит где-то в3или даже4часа дня, то что б не быть голодным они придумали ланч. Ланч проводят в полдень, с 12 до 13 часов, кушают что то легкое, что б не испортить аппетит перед обедом и еще пьют чай.
Ланч — второй завтрак, это слово заимствованное из иностранных языков и ассоцииခိုင်ခံ့သောစာသားровалось еще несколько лет назад с сытой буржуазной жизнью, у нас, в России не употреблялось. Сейчас же в меню ресторанов и кафе постоянно можно видеть бизнес — ланч- эти перекусы в рабочее время с quot;заманухойquot; в виде низких цен за обед.
ဒါကြောင့်စသည်တို့ကိုညီလာခံ, အစည်းအဝေးများမှာဖက်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည် ကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုကြေညာ ကော်ဖီ — брейк.
24 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,325 စက္ကန့်ကျော် Generate ။